Dhuusamareeb oo gaarey Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
Dhuusamareeb oo gaarey Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya
March 4, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa Maanta oo Arbaco ah gaarey Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac,iyada oo siweyn halkaasi loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga wasiirka oo ay qeyb ka yihiin Xubno uu kamid yahay Guddoomiyaha gudiga dastuurka ee Baarlamanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Xubno kale ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey Madaxweyne kuxigeenka Galmudug & Xubno kale.
U jeedka wafdiga ay Maanta u tageen Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay in halkaasi lagu qaban doono shir looga hadlayo Ololaha Wacyigelinta ee dib-u-eegista Dastuurka,si sare loo qaado ogaalka bulshada ee ku aadan dib-u-eegista dastuurka iyo in ay aragti ku yeeshaan arrimaha dib-u-eegista dastuurka.
Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya ayaa horay waxaa ay shirar ku saabsan Ololaha Wacyigelinta ee dib-u-eegista Dastuurka ku qabatay Xarmaha Maamul Goboleedyada dalka.
Previous articleWasiir Janan iyo Cabashada Xildhibaanada Mandheera!
Next articleDowladda Kenya oo hakisay duulimaadyadii dalka Talyaaniga